Ajaaniibta cusub ayay ku adag tahay shatiga darawalnimada tagaasida - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ajaaniibta cusub ayay ku adag tahay shatiga darawalnimada tagaasida
La daabacay måndag 24 april kl 08.00
Lama aqoonsana dokumentiyada ka soo baxa Suuriya iyo Soomaaliya.
Ahmad Shahin oo ka soo jeeda dalka Suuriya ayuu ku adag yahay shatiga darawal-nimada tagaasida. sawir: Noor Bolad/Sveriges radio
Shirkadaha tagaasida ayaa aad baahi ugu qaba dareewallo, hase yeeshee ey dadyoowga dhowaan dalka yimid ee ka soo jeeda waddammada Suuriya iyo Soomaaliya aaney suurtagal u ahayn iney helaan shatiga darawal-nimada tagaasida.
Sidaas ayaa laga ogaaday baadhitaan, ay weriyaha Noor Bolad oo ka hawlgasha P4 Sjuhärad, sameeysay.
Xeerka ayaa oranaya in ciddii doonaysa inay ku howl-gasho darawal tagaasida ay waajib tahay inuu caddeeyo shantii sannadood ee ugu dambeeysay in aanu wax dembiya gelin.
Kontraoolkan ayuu macnihiisu yahay sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka macaamiisha. Halka dhanka kale aanay suurtagal ahayn in la aqoonsado waraaqaha ka soo baxa waddammada Suuriya iyo Soomaaliya ee lagu caddeeyneyo in aannu shakhsigu wax dembi ah gelin shantii sannadood ee ugu dambeeysay si lagu hantiyo warqadda aqoonsiga darawallada tagaasida. Waa mid aanay ictiraafsanayn hayadda hoggaanga xamuulka waraaqaha ka soo baxa waddammadaasi.
Maxaa ii sugan si aan ku shaqa galo?
Axmad Shahin, wuxuu diidmo ku helay dalabkiisii
Shahin, ahna muwaadin ka soo jeeda dalka Suuriya wuxuu ku dhaqan yahay magaalada Borås, Shahin ayaa Sweden ku dhaqnaa muddo saddex sannadood cagacageeynaysa, isagoo diidmo ku helay codsigiisii shatiga daraw-nimada tagaasida.
–Maxaan sameeyn karaa ayuu leeyahay si aan shaqo ku helo?
La aqoon-san maayo dokumentiga
Hayadda hoggaanka xamuulka - Transportstyrelsen waxay ka beeg qaadata xogta aasaaska sal-dhiga wakaaladda socdaalka iyo war-bixinnadeeda la xiriira xaaladaha waddammada ee lagu magacaabo liiska Lifo iyo qiimeeynta waddammada aan ammaankooda la xaqiijin karin.
Waddammada Suuriya iyo Soomaaliya ayaa ka mid ah waddammada aaney kaabiyeyaashoodu sugneeyn sidaa daraadeedna aan la ictiraafsaneyn qoraallada ka soo baxa.
Muhiimad waxaa ku fadhida in la sugo ammaanka macaamiisha tagsileeyda.
Markus Edsbagge, oo ka howl-gala hayadda hoggaanka xamuulka
Kharash maalaayacni oo iiga baxay
Axmad Shahin ayaa sheegay inuu ku khrashgareeyay 12 000 oo koron siduu ku qaadan lahaa warqadda darawal-nimada tagaasida. Muddadii uu iskuulka dhiganayay ogaansho uma aannu lahayn in aan la aqoonsanayn dokumentiga lagala yimaado dalka Suuriya. Mana ahan mid ay hayadda hoggaanka xamuulku ku bayaanisay boggeeda internet-ka. Haddii uu Axmad Shahin ogaan lahaa middaasi iskuma aanu howlayn, sida uu sheegay.
Is-bedel ayaa laga yaabaa in dhowaantan lagu tallabsado
Waxaa laga yaabaa in tallaabooyinkaa wax laga bedelo. Maxkamadda maamulka ayay hor-taalaa dacwad u dhiganta midda uu ka andacoonayo Axmad Shahin.
– Waa muhiim in la dhorwo ammaanka macaamiisha tagaasida, hase yeeshee muddo intee le’eg ayay tahay in laga doodo in dib loo eego si loo qiimeeyo anshaxa dareewal-nimada dalbanaya, sida uu sheegay Markus Edsbagge oo ka howl-gala Transportstyrelsen.